Leica C-Lux, ọhụụ dị oke ọnụ mara mma mara mma na ihe ngosi 1-inch | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụ eziokwu na ahịa maka kọmpụta kọmpat nwere nnukwu ekwentị site na ekwentị. Ọ bụ eziokwu na ha na-ewere obere ohere n’akpa anyị, akpa ma ọ bụ n’akpa. Otú ọ dị, inwe ibu abụọ Ngwa n’elu ya bụ ihe mmadụ niile anaghị adị njikere. Nsonazụ ahụ? Ana m ewere "ihe niile n'otu" na voila; nke ahụ bụ ịsị: mobile nwere ọgụgụ isi.
Nke ahụ kwuru, enwere ụlọ ọrụ ndị na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ụdị kọmpụta mana nke ahụ na-enye nke ahụ karịa nke ekwentị maka nke ukwuu adịchaghị ihe obula, apughi m inye. Onye ikpeazu rutere bu Leica C-Lux, igwefoto nwere oke okike - dị ka ihe niile Leica na-enye - yana ezigbo agwa iji bụrụ enyi gị kwesịrị ntụkwasị obi ebe ọ bụla ị gara.
Ica nwere ike ịchọta Leica C-Lux na agba abụọ dị iche iche: ọla edo ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ. Ka ọ dị ugbu a, na dịka anyị kwuru, ọ nwere kọmpat a haziri, ọ bụ ezie na nke a apụtaghị na ọ na-enye nsonaazụ ọma. Iji malite, ihe mmetụta ya bụ 1 inch; na ndị ọzọ okwu, mpempe achicha ga-agbagha na mpi ụdị dị ka Sony ma ọ bụ Panasonic. Ọzọkwa, ndị mkpebi kachasị na nke ị nwere ike ijide ihe oyiyi bụ 20 megapixels.
Ọzọkwa, Leica C-Lux a na-etinye mbugharị nke oge 15; awade flash; ya n'azụ ihuenyo bụ 3 sentimita asatọ na multi-aka; na mgbakwunye na inye a Ihe nlere LCD nwere ihe nhicha ruru nde 2,3. Kedu ihe ọzọ anyị nwere ike ikwu banyere ya? Ọfọn, na njikọ akụkụ anyị ga-enwe ma Bluetooth ma WiFi, ihe na-ewu ewu nke ekwentị mkpanaaka na mbadamba ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkwekọrịta.
Banyere akụkụ vidiyo nke Leica C-Lux a, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ka ihe nlereanya ya nwee ohere, ọ gaghị eleghara mkpebi kachasị ewu ewu n'oge ahụ anya: kpọmkwem, nke a nwere ike iji 4k clips. N'ikpeazụ, gwa gị na ọnụahịa ya agaghị adị ọnụ ala: ọ ga-ere ire na-esote Julaị ma kụọ ụlọ ahịa na ọnụahịa 1.050 dollar.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Foto » Leica C-Lux, ọhụụ dị oke ọnụ mara mma mara mma na ihe mmetụta 1-anụ ọhịa
Ihe ngosi 9 Galaxy Note ga - akụ ahịa na 512 GB nke nchekwa
Imeri otu n’ime Rowenta Smart Force dị mkpa anyị na-agbagha n’izu a!